ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာနော်မန်ဒိုဂျစ် - "ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲစေနိုင်သော ဦး နှောက်" (၂၀၀၇) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌တင်
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာနော်မန်ဒိုဂျစ် -“ ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲစေသည့် ဦး နှောက်” (၂၀၀၇)
comments: ဤစာမကျြနှာ ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက် စိတ်ပညာရှင် Norman Doidge မှ (၂၀၀၇) သည်အပြာစွဲစွဲမှုနှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိပြီးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအရသာမည်သို့မြင့်တက်လာသည်ကိုရှင်းပြသည်။သည်းခံနေခြင်း“) ။ သင်နှစ်သက်လျှင်အခန်းတစ်ခန်းလုံးကိုဖတ်ပါ။ အရသာနှငျ့ခစျြတ Acquring ။
Update ကို 1: Doidge အားဖြင့် 2014 ဆောင်းပါး: အဆိုပါဦးနှောက်အပေါ်လိင်: ဦးနှောက်ပလပ်စတစ်အင်တာနက်က Porn အကြောင်းသွန်သင်အဘယျသို့.
Update ကို 2: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်လေ့လာမှုများများစာရင်း.
လက်ရှိ porn ကပ်ရောဂါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာဝယ်ယူရနိုင်မယ့်ဂရပ်ဖစ်သရုပ်ပြပေးသည်။ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုဖြင့်ကယ်လွှတ်ညစ်ညမ်း, ညျဝါ neuroplastic ပြောင်းလဲမှုများအတွက်လိုအပ်ချက်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတဦးတည်း [သစ်ကိုအာရုံကြော circuitry-တစ်ဦးစွဲ၏သော့ချက်ဒြပ်စင်ဖွဲ့စည်း] ။
ညစ်ညမ်းတဲ့သက်သက်သာထူးခြားသောမွေးရာပါကိစ္စဖြစ်, ပထမတစ်ချက်မှာပုံရသည်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများကိုအီဗိုလူးရှင်းအနှစ်သန်းပေါင်းများစွာ၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်သောထူးခြားသောမွေးရာပါတုံ့ပြန်မှု, ဖြစ်ပေါ်။ မှန်ဖြစ်လျှင်ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းမပြောင်းလဲသောပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးရန်မေတ္တာရပ်ခံကြောင်းအဆိုပါတူညီသောအစပျိုးခြင်း, ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်သူတို့၏အချိုးအစား, ကျွန်တော်တို့ကို excite လိမ့်မယ်။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှု, မညီကြောင်း, ကြောက်အပြင်းအထန်နဲ့သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်သဘာဝ, pent-up, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇအတိုင်းလှတျမွောကျကြောင်းနေကြသည်တောင်းဆိုဘို့ဤညစ်ညမ်းကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ရှိသည်မယ်လို့အရာဖြစ်တယ်။
ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ညစ်ညမ်းများ၏ content တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ပြောင်းလဲနေသော တစ် ဦး ဝယ်ယူအရသာ၏တိုးတက်မှုperfectlyုံသရုပ်ဖော်သောဖြစ်ရပ်ဆန်း။ လွန်ခဲ့သောအနှစ်သုံးဆယ်က "အမာခံ" ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်များသောအားဖြင့်ယင်းကိုဆိုလိုသည် အကဲဆတ်သော သူတို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါကိုပြသနှိုးဆော်မိတ်ဖက်နှစ်ခုအကြားလိင်ဆက်ဆံမှု၏သရုပ်ဖော်ပုံ။ “ Softcore” ဆိုသည်မှာအမျိုးသမီးများ၏ရုပ်ပုံများကိုအများအားဖြင့်အိပ်ရာပေါ်၌၊ သူတို့၏အိမ်သာတွင်သို့မဟုတ်သန္ဓေသားအဝတ်အစားအမျိုးမျိုးတွင်အချို့သော Semi- ရင်ခုန်စရာအနေအထားများ၌ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုအခါအမာခံများပြောင်းလဲလာပြီးအတင်းအဓမ္မလိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ အမျိုးသမီးများမျက်နှာပေါ်ရှိသန္ဓေသားပြုခြင်းနှင့်ဒေါသစူးသောလိင်ဆက်ဆံမှုများ၌လိင်မုန်းတီးခြင်းနှင့်အရှက်ရစေခြင်းတို့ဖြင့်လိင်မှုကိုပေါင်းစပ်စေသည့်ဇာတ်ညွှန်းများပါ ၀ င်သည်။ Hardcore ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ယခုအခါဖောက်ပြန်သောကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းလေ့လာနေပြီး၊ softcore သည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကပင်ခိုင်မာသည့်အရာဖြစ်ခဲ့ပြီးယခုအခါကေဘယ်လ်တီဗီတွင်ရရှိနိုင်သည့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ခေတ်မမှီသေးသောပြည်နယ်အသီးသီးမှအမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရသောပျော့ပျောင်းသောရုပ်ပုံများသည်ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရော့ခ်ဗီဒီယိုများ၊ ဆပ်ပြာအော်ပရာများ၊ ကြော်ငြာစသည့်အရာများအပါအဝင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်နေ့လုံးပင်မမီဒီယာတွင်ဖော်ပြနေသည်။
ညစ်ညမ်းရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းထူးခြားသောခဲ့; ကကဗီဒီယိုငှားရမ်းခြင်း၏ 25 ရာခိုင်နှုန်းနှင့်လူများအွန်လိုင်းသွားဘို့ပေးစတုတ္ထအဖြစ်အများဆုံးအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ 2001 အတွက်ကြည့်ရှုတစ်ခု MSNBC.com စစ်တမ်း 80 ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့အန္တရာယ်မှာသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်များချပြီးခဲ့ညစ်ညမ်းဆိုဒ်များတွင်ဤမျှလောက်အချိန်ဖြုန်းခဲ့ကြခံစားခဲ့ရကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယခုမရှိတော့ဝှက်ထားလျက်ရှိ၏ကြောင့်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာများနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုဖွဲ့စည်း၏လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်နည်းနည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အထူးသဖြင့်ပလပ်စတစ်စိတ်နှင့်အတူလူငယ်များ၏သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင့် Softcore ညစ်ညမ်းရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုယခုအများဆုံးလေးနက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးလူကြီးများအပေါ်ညစ်ညမ်း၏ပလပ်စတစ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုလည်းလေးနက်ဖြစ်နိုင်ပြီး, အသုံးပြုရန်သောသူတို့အားပေးသောသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်က reshaped နေကြသည်ဖို့အတိုင်းအတာမရှိအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
နှောင်းပိုင်းတွင် 1990s ဖို့ mid- စဉ်အတွင်းအင်တာနက်ကိုလျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်နှင့်ညစ်ညမ်းပေါ်မှာပေါက်ကွဲသောအခါ, ရှိသမျှတို့ကိုငါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အတူတူဇာတ်လမ်းရှိခဲ့သောလူတို့၏အရေအတွက်ကုသသို့မဟုတ်အကဲဖြတ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောသို့မဟုတ်အပြောင်ဒီဂရီအထိသူ့ကိုစိတ်ပျက်ပင်ပူပန်ခြင်းသို့မဟုတ်, သူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ပုံစံအပေါ်တစ်ဦးစိတ်ပျက်စရာအကျိုးသက်ရောက်မှုခဲ့နောက်ဆုံးမှာသည်သူ၏ဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာနိသင်ထိခိုက်သော။ ညစ်ညမ်းတဲ့ကြင်နာများအတွက်အရသာဝယ်ယူခဲ့
ဤလူတို့၏အဘယ်သူမျှမ, အခြေခံကျကျနုလူမှုရေးအရအဆင်မပြေ, ဒါမှမဟုတ်အစစ်အမှန်မိန်းမနှင့်ဆက်ဆံရေးများအတွက်အစားထိုးခဲ့တဲ့ဧရာမညစ်ညမ်းစုဆောင်းခြင်းစကမ္ဘာမှဆုတ်ခွာခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားကျိုးကြောင်းဆီလျော်အောင်မြင်သောဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်သာယာသော, ယေဘုယျအားဖြင့်စဉ်းစားဟန်ယောက်ျား, ဖြစ်ကြသည်။
ငါတခြားပြဿနာဤလူတို့သညျတစျဦးကုသနေစဉ်ပုံမှန်အားဖြင့်, သူသည်မိမိကိုမိမိညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြည့်, အင်တာနက်အပေါ် ပို. ပို. အချိန်ဖြုန်းတွေ့နီးပါးအနေနဲ့ဘေးဖယ်များနှင့်အဆင်မပြေပြောနေသကဲ့သို့, သတင်းပို့လိမ့်မယ်။ သူကလူတိုင်းထိုသို့ပြုကြသည်ကိုအားကောင်းမောင်းသန်ဖြင့်သူ၏အီဖြေလျှော့ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ အချို့ကိစ္စများတွင်သူတစ်ဦးမှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကိုစတင်မယ်လို့ Playboy-type site ကိုသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးဇီးအဖြစ်စေလွှတ်တော်မူခဲ့တဲ့ကိုယ်လုံးတီးပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကလစ်မှာ။ သည်အခြားကိစ္စများတွင်သူဆိုဒ်များ risque သူ့ကို redirected ကြောင်းအကြံပြုချက်ကြော်ငြာနှင့်အတူတစ်အန္တရာယ်ကင်း site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုမယ်လို့နှင့်မကြာမီသူနှင့်ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။
ဤလူတို့၏တစ်ဦးကအရေအတွက်အားလည်း, ငါ့အာရုံကိုဖမ်းမိကြောင်းမကြာခဏသွားတာအတွက်တခြားအရာတစ်ခုခု, သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူတို့နေဆဲသူတို့ကိုဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျဆွဲဆောင်မှုစဉ်းစားသော်လည်း, သူတို့သည်မိမိတို့၏အမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်, အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်မိန်းကလေးများကဖွင့်ထားကြောင်းအတွက်တိုးမြှင့်အခက်အခဲကဖော်ပြခဲ့သည်။ ငါမေးတဲ့အခါဒီဖြစ်စဉ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုဖို့မဆိုဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့ပါလျှင်, သူတို့ကကနဦးကသူတို့ကိုလိင်စဉ်အတွင်းပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားရအကူအညီပေးခဲ့ပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းဖြေသည်။ အခုတော့အစားအိပ်ရာများတွင်ဖြစ်ခြင်းကိုခံစားဖို့သူတို့ရဲ့အာရုံကိုသုံးပြီး၏, ပစ္စုပ္ပန်အတွက်, သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်အတူ lovemaking ပို. ပို. သူတို့တစ်တွေ porn script ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း fantasize သူတို့ကိုလိုအပ်သည်။ တချို့ကညင်ညင်သာသာ porn ကြယ်များကဲ့သို့အပြုမူဖို့သူတို့ရဲ့ချစ်သူများစည်းရုံးဖို့ကြိုးစား, သူတို့ဆန့်ကျင်အဖြစ် "fuck ဆိုတဲ့" တွင် ပို. ပို. စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည် "မေတ္တာအောင်။ " သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ဘဝများ ပို. ပို. သူတို့ခဲ့သောကးကလွှမ်းမိုးခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်စကားကိုပြောခြင်းငှါမိမိတို့သို့ဒေါင်းလုပ်လုပ် ဦးနှောက်, ဤအသစ်သော script များမကြာခဏပိုပြီးစရိုက်နှင့်၎င်းတို့၏ယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ထက်ပိုမိုအကြမ်းဖက်ခဲ့ကြသည်။ ငါသည်ဤလူတို့သညျရှိခဲ့မည်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတီထွင်ဖန်တီးမှုသေဆုံးနေသောအထင်အမြင်တယ်သူတို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။
ငါတွေ့ရှိခဲ့အပြောင်းအလဲကုထုံးအတွက်လူအနည်းငယ်မှမသာ။ တစ် ဦး ကလူမှုရေးပြောင်းကုန်ပြီဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ပုဂ္ဂလိကလိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်များသောအားဖြင့်ခက်ခဲလေ့ရှိသော်လည်းယနေ့တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းတွင်မူထိုသို့မဟုတ်ပါ၊ ဤပြောင်းလဲမှုသည်၎င်းကို“ အပြာစာပေရုပ်ပုံ” ဟုခေါ်ဆိုခြင်းမှပိုမိုပေါ့ပေါ့သောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သော“ အပြာ” ဟူသောပြောင်းလဲမှုနှင့်တိုက်ဆိုင်သည်။ အမေရိကန်ကျောင်းဝင်းဘဝအကြောင်း၊ ငါ Charlotte Simmons AmTom Wolfe သည်ကျောင်းသားများကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းများ၌နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာခဲ့သည်။ ယောက်ျားလေးအိုင်ဗီပီတာစ်စာအုပ်တွင်ယောက်ျားနေအိမ်သို့ ဝင်၍“ ဘယ်သူ့ကိုမှညစ်ညမ်းစေတာလဲ” ဟုဆိုသည်။
Wolfe ကဤသို့ဆက်ပြောသည် -“ ဒါကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့တောင်းဆိုမှုမဟုတ်ဘူး။ ယောက်ျားများစွာသည် ၄ ​​င်းတို့သည်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ချင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပုံကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောခဲ့ကြသည်၊ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကအိုင်ဗီပီတာအား“ တတိယထပ်ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ သူတို့တစ်တွေလက်မဂ္ဂဇင်းတွေအဲဒီမှာတက်လာတယ်။ ” သို့သော်ပီတာက“ ငါတည်ဆောက်တာပါ သည်းခံနေခြင်း မဂ္ဂဇင်းတွေအတွက် ... ဗွီဒီယိုလိုတယ်။ " အခြားယောက်ျားလေးတစ် ဦး က“ Chrissake, IP, ည ၁၀ နာရီထိုးပြီ။ နောက်တစ်နာရီမှာ cum dumpsters ကဒီမှာလာပြီးညအိပ်ဖို့လာလိမ့်မယ်။ မင်းက porn ဗီဒီယိုတွေ၊ ထို့နောက်အိုင်ဗီသည် 'ငါ porn လိုချင်တယ်။ သဘောတူညီချက်ကဘာလဲ '
အဆိုပါကြီးတွေသဘောတူညီချက်သည်သူ၏ဖြစ်ပါသည် သည်းခံနေခြင်း။ သူဟာမရှိတော့တစ်ချိန်ကသူ့ကိုဖွင်သောပုံရိပ်တွေပေါ်မွငျ့မားရနိုင်သူတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲတူသောကြောင်းအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ထိုအခါအန္တရာယ်ကငါကြိမ်အပ်သော, အရသာမှာအာနိသင်ပြဿနာများနှင့်အသစ်မှဦးဆောင်မြင်နေခဲ့ပါတယ်ဘယ်သူကိုလူနာပြုသကဲ့သို့ဤအသည်းခံစိတ်ဆက်ဆံရေးသို့ကူးသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ ညစ်ညမ်းဓာတ်ပုံဆရာများသည်စာအိတ်အသစ်ကိုပိုမိုတင်းကျပ်စွာမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့၏စာအိတ်ကိုတွန်းအားပေးနေသည်ဟုဝါကြွားကြသောအခါသူတို့ဖောက်သည်များကအကြောင်းအရာအပေါ်သည်းခံနိုင်မှုကိုတည်ဆောက်ပေးသောကြောင့်သူတို့မဖြစ်မနေပြောရမည်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားညစ်ညမ်းသောမဂ္ဂဇင်းများနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏နောက်ကျောစာမျက်နှာများသည် Viagra အမျိုးအစားဆေးဝါးများဖြစ်သည်။ လိင်တံတွင်အိုမင်းခြင်းနှင့်သွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်းများနှင့်ပတ်သက်သောစိုက်ထူသည့်ပြproblemsနာများရှိသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ဆေးဝါးများကိုကြော်ငြာများဖြင့်ဖြည့်ထားသည်။ ဒီကနေ့ညစ်ညမ်းတဲ့လူငယ်လေးများသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရခေါ်ဝေါ်ကြသည့်အတိုင်းခွန်အားမရှိခြင်း (သို့) erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုလွန်စွာကြောက်နေကြသည်။ အထင်မြင်မှားစေသောအသုံးအနှုန်းကဤအမျိုးသားများသည်သူတို့၏လိင်တံတွင်ပြaနာရှိသည်ဟုဆိုလိုသည် ပြဿနာကသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးနှောက်မြေပုံအတွက်မိမိတို့ခေါင်းပေါ်၌တည်ရှိ၏။ သူတို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုတဲ့အခါလိင်တံဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာခဲသူတို့စားသုံးကြသည်ညစ်ညမ်းနှင့်၎င်းတို့၏ခွန်အားမရှိခြင်းတို့အကြားဆက်ဆံရေးရှိစေခြင်းငှါသူတို့ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ (သို့သော်လူအနည်းငယ်ကကွန်ပျူတာညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်သူတို့၏အချိန်များကို“ ငါ့ ဦး နှောက်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အချိန်” ဟုဖော်ပြသည်။ )
Wolf ၏မြင်ကွင်းမှယောက်ျားလေးတစ် ဦး သည်သူတို့၏ရည်းစားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်လာနေသောမိန်းကလေးများကို“ cum dumpsters” ဟုဖော်ပြသည်။ သူလည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလွှမ်းမိုးသည်၊ အကြောင်းမှာ“ ရုပ်ရှင် cum dumpsters” သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ရှင်များတွင်ပါ ၀ င်သောအမျိုးသမီးများနည်းတူအမြဲတမ်းစိတ်အားထက်သန်သော၊
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း၏စွဲလမ်းနေတဲ့ဥပစာမဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးကတော့စှဲမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အရက်သေစာမှဖြစ်ကြသည်။ ပြည်သူ့ပင်အပြေးရန်, လောင်းကစားဝိုင်းမှအလေးအနက်ထားစွဲစေနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးစွဲလုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်သူတို့စိတ်ကျေနပ်မှုအဘို့အဆွမြင့်မားခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သည်းခံစိတ်ဖွံ့ဖြိုး, အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကြားမှထုတ်ရှာလှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့အရှုံးပြနှင့် အတှေ့အကွုံဆုတ်ခွာ သူတို့စွဲလမ်းလုပ်ရပ်အဆုံးသတ်မနိုင်လျှင်။
အားလုံးစွဲဦးနှောက်အတွက်ရေရှည်, တခါတရံတွင်ရာသက်ပန်, neuroplastic ပြောင်းလဲမှုပါဝငျသညျ။ စွဲသည်, ဖြည့်ညှင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး, သူတို့စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုရှောင်ရှားရန်မှန်လျှင်သူတို့လုံးဝပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ Alcoholics Anonymous မှ“ ယခင်အရက်သမားများ” ဟူ၍ မရှိကြောင်းနှင့်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာမသောက်ခဲ့ကြသူများကိုအစည်းအဝေးတွင်မိမိကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးရန် 'ကျွန်ုပ်၏အမည်မှာဂျွန်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်အရက်ပါ' ဟုပြောဆိုသည်။ [ဦး နှောက်] ပလပ်စတစ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, သူတို့ကမကြာခဏမှန်ကန်သောဖြစ်ကြသည်။
တစ်လမ်းကမူးယစ်ဆေးဝါးဘယ်လောက်စွဲလမ်းဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာ, Maryland ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes မှာသုတေသီများ (NIH) ကမူးယစ်ဆေးတစ်ခုရိုက်ချက်ရရှိသွားတဲ့သည်အထိဘားကိုနှိပ်ဖို့ကြွက်လေ့ကျင့်။ တိရစ္ဆာန်အဆိုပါခက်ခဲမူးယစ်ဆေးပိုစွဲလမ်း, ဘားကိုနှိပ်မှလုပ်ကိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်။ ကိုကင်း, အားလုံးနီးပါးသည်အခြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဦးနှောက်ထဲမှာပျော်မွေ့-ပေးခြင်း neurotransmitter dopamine ပိုပြီးတက်ကြွအောင်ပြေးအဖြစ်ပင် nondrug စှဲ။ ကျွန်တော်တစ်ခုခု-run နေတဲ့လူမျိုးရေး, win-ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်က၎င်း၏လွှတ်ပေးရေးကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းပြီးမြောက်တဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ Dopamine, အကျိုးကို transmitter ကိုလို့ခေါ်ပါတယ်။ မောသော်လည်း, ငါတို့စွမ်းအင်, စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အပျြောအပါးများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုတစ်ခုမြင့်တက်ရပင်ကိုငါတို့လက်မြှင့်နှင့်တစ်ဦးအောင်ပွဲရင်ခွင်ကို run ။ အဆိုပါအရှုံးသမားမျှထိုကဲ့သို့သော dopamine မြင့်တက်ရသူကတခြားလက်ပေါ်တွင်ချက်ချင်း, စွမ်းအင်ထဲက run အဆိုပါ finish ကိုလိုင်းမှာပြိုကျခြင်း, သူတို့ကိုယ်သူတို့အကြောင်းကိုရွားလှခံစားရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dopamine system ကိုအပိုင်စီးခြင်းအားဖြင့်, စွဲလမ်းတ္ထုများကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိုသို့အလုပ်လုပ်ရန်မလိုဘဲကျွန်တော်တို့ကိုပျော်မွေ့ပေးပါ။
Dopamine သည် Merzenick ၏လုပ်ငန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အပြင်ပလပ်စတစ်ပြောင်းလဲခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ငါတို့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသည့်ထပ်တူထပ်မံတိုးမြှင့်သော dopamine သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကိုပြီးမြောက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အား ဦး တည်စေသောအပြုအမူများအတွက်တာဝန်ရှိအာရုံခံဆက်သွယ်မှုများကိုလည်းပိုမိုခိုင်မာစေသည်။ Merzenick သည်အသံတီးနေစဉ်တွင်တိရစ္ဆာန်၏ dopamine ဆုလာဘ်စနစ်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကိုအသုံးပြုသောအခါ dopamine ထုတ်လွှတ်မှုသည်ပလတ်စတစ်ပြောင်းလဲမှုကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတိရစ္ဆာန်၏အာရုံမြေပုံတွင်အသံအတွက်ကိုယ်စားပြုမှုကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်အရေးကြီးသောချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုမှာ dopamine သည်လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွင်ထွက်ပေါ်လာခြင်း၊ လိင်နှစ်မျိုးလုံးတွင်လိင်စိတ်ကိုတိုးပွားစေခြင်း၊ ထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ၏စွဲလမ်းစေသောစွမ်းအားဖြစ်သည်။
အဲရစ် Nestler, တက္ကဆက်တက္ကသိုလ်မှ, စှဲတိရိစ္ဆာန်များ၏ဦးနှောက်ထဲမှာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေပုံကိုပြသထားသည်။ အများအပြားစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ဦးကတစ်ခုတည်းထိုးသည့်အာရုံခံအတွင်းစုဆောင်းကြောင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB ဟုခေါ်သောပရိုတိန်း, ထုတ်လုပ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ပိတ်ထားသည့်မျိုးဗီဇထိခိုက်တစ်မျိုးဗီဇ switch ကိုပစ်သည်အထိမူးယစ်ဆေးအသုံးပြုသည်တစ်ဦးချင်းစီအချိန်ပိုမိုမြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB စုဆောင်း။ ဒီ switch ကိုလှန်လှောကြည့်မူးယစ်ဆေးရပ်တန့်နေသည်ရှည်လျားပြီးနောက်ဆက်လက်ရှိကြောင်းအပြောင်းအလဲများ, ဦးနှောက်ရဲ့ dopamine စနစ်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှဦးဆောင်ခြင်းနှင့် ပို. ကျရောက်နေတဲ့စွဲဖို့တိရိစ္ဆာန် rendering ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့အပြင် deltaFosB ၏စုဆောင်းခြင်းနှင့် dopamine စနစ်အတူတူပင်အမြဲတမ်းအပြောင်းအလဲများကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြထိုကဲ့သို့သောပြေးနှင့် sucrose သောက်သုံးရေအဖြစ် non-အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု, ။ [မှတ်စု: deltaFosB အပေါ်ကောင်းသောဆောင်းပါး]
ညစ်ညမ်းဆရာများသည်လိင်ပျော်ရွှင်မှုမှကျန်းမာသောကျေနပ်မှုနှင့်သက်သာမှုကိုပေးမည်ဟုကတိပေးသည်၊ သို့သော်သူတို့မကြာခဏဖြည့်ဆည်းပေးသည့်အရာမှာစွဲလမ်းမှု၊ ဝိရောဓိအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်သောအထီးလူနာများသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏတောင့်တခဲ့သော်လည်းမနှစ်သက်ခဲ့ပါ။ ပုံမှန်အမြင်ကတော့စွဲလမ်းသူသည်သူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်မွေ့ပြီးရုပ်သိမ်းခြင်း၏နာကျင်မှုကိုမကြိုက်သောကြောင့်သူ၏ပြင်ဆင်မှုကိုပိုမိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများရှိလျှင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသည် အဘယ်သူမျှမ သူတို့ကသူတို့ကိုမြင့်မားစေရန်တစ်ဦးမလုံလောက်သောထိုးရှိသည်, သူတို့ဆုတ်ခွာရန်စတင်မတိုင်မီပိုပြီးတပ်မက်ဦးမည်ကိုသိသည့်အခါပျော်မွေ့၏အလားအလာကို။ ချို့တဲ့ခြင်းနှင့်အကြိုက်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအရာဖြစ်ကြ၏။
တစ်ဦးစှဲလမျးသူအတွေ့အကြုံများမတရားသောသည်သူ၏ပလတ်စတစ်ဦးနှောက်မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံမှထိခိုက်ဖြစ်လာသည်။ အကြောင်းမူကား, အသိချို့တဲ့တိုးလာစေပါတယ်။ ဒါဟာာင်းမှဦးဆောင်ကြောင်း, တစ်ဦးစွဲလမ်းပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုမှထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပွား, deltaFosB များစုစည်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာနှစ်ခုသီးခြားအပျော်အပါးစနစ်များ, စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အပျြောအပါးများနှင့်စိတ်ကျေနပ်စရာအပျြောအပါးနှင့်တသားတနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်တစ်ခုရှိသည်ကြောင့်ညစ်ညမ်းကျေနပ်စရာထက်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲ။ အဆိုပါစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စနစ်ကအဲဒီလိုလိင်သို့မဟုတ်အကောင်းတစ်ဦးမုန့်ညက်အဖြစ်ကျနော်တို့ကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်တစ်ခုခုစိတ်ကူးယဉ်ရသော "အစာစားချင်စိတ်" အပျော်အပါးမှပြောပြတယ်။ ၎င်း၏ neurochemistry အကြီးအကျယ် dopamine-ဆက်စပ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်းမာမှုအဆင့်ကိုတိုးပွါးလာ။
ဒုတိယအပျြောအပါးစနစ်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံဒါမှမဟုတ်မုန့်ညက်ရှိခြင်း, တစ်ငြိမ်သက်, အပျြောအပါးပြည့်စုံတက်ရောက်ကြောင်းသူတွေရဲ့စားသောက်ပျော်မွေ့။ ၎င်း၏ neurochemistry opiates နှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်ငြိမ်းချမ်းသော, ပျော်ရွှင်ဖွယ်ချမ်းသာပေးသည့်နဲ့အတူ Endorphins များလွှတ်ပေးရန်, အပေါ်အခြေခံသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်မရေမတွက်နိုင်သောလိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာလိင်အင်္ဂါများကမ်းလှမ်းခြင်းအားဖြင့် appetitive system ကို hyperactivates ။ ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်သူများသည်သူတို့၏ ဦး နှောက်ထဲတွင်မြေပုံအသစ်များကိုသူတို့ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာအသုံးပြုမှုတစ်ခု (သို့) ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ဦး နှောက်တစ်ခုဖြစ်လို့မြေပုံdevelopရိယာတစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာအဲဒါကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ကိုယ်လုံးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ကိုယ်လုံးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကိုစိတ်မရှည်သည့်နည်းတူကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားမှုကိုလည်းနှိုးဆွပေးသည်။
ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်နေသည့်သူတို့၏ကွန်ပျူတာများရှိအမျိုးသားများသည် NIH ၏လှောင်အိမ်အတွင်းရှိကြွက်များနှင့်တူသည်။ dopamine သို့မဟုတ်၎င်းနှင့်တူသောအရာတစ်ခုရရန်ဘားကိုနှိပ်လိုက်သည်။ ဦး နှောက်မြေပုံများပြောင်းလဲခြင်းအတွက်လိုအပ်သောအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသင်တန်းများသို့သူတို့သွေးဆောင်ခံခဲ့ရသည်။ အတူတူပစ်ခတ်သောအာရုံခံဆဲလ်များသည်အတူတကွဝါယာကြိုးသဖြင့်ဤလူများသည် ဦး နှောက်၏အပျော်အပါးစင်တာများသို့ထိုရုပ်ပုံများကိုကြိုးများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပလပ်စတစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်လိုအပ်သောအာရုံစိုက်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကွန်ပျူတာများနှင့်ဝေးဝေးနေစဉ် (သို့) ရည်းစားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်ထိုရုပ်ပုံများကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ သူတို့ဟာလိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုခံစားရပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အခါမှာအော်ဂဇင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ “ dopamine of spritz” ဆုချီးမြှင့်တဲ့ neurotransmitter ကအစည်းအဝေးအတွင်းမှာ ဦး နှောက်ထဲမှာဆက်သွယ်မှုတွေကိုပိုမိုခိုင်မာစေခဲ့ပါတယ်။ ဆုလာဘ်အပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့ခဲ့ရုံမက, သူတို့သည်ဝယ်ယူမှုကိုရှက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ Playboy တစ်စတိုးဆိုင်မှာ။ ဤတွင်မျှမ "ပြစ်ဒဏ်" သာဆုလာဘ်နဲ့အပြုအမူဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ web site များဟာသူတို့ရဲ့အသိပညာမပါဘဲ၎င်းတို့၏ဦးနှောက်ပြောင်းလဲကြောင်း themes များနှင့် script များမိတ်ဆက်အဖြစ်သူတို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တွေ့ရှိခဲ့သောအရာကိုများ၏ content ပြောင်းလဲသွားတယ်။ plasticity ယှဉ်ပြိုင်သောကွောငျ့အသစ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပုံရိပ်တွေများအတွက်ဦးနှောက်မြေပုံခဲ့သောအရာကို၏ကုန်ကျစရိတ်မှာတိုးလာယခင်ကသူတို့ကို-အကြောင်းပြချက်ဆွဲဆောင်, ငါသည်ယုံကြည်သူတို့တစ်တွေအလှည့်-on ရဲ့၎င်းတို့၏မိန်းကလေးလျော့နည်းရှာတွေ့မှစတင်ခဲ့သည်။
သူသည်ရိုက်ကူးထားသောပုံများမပေါ်မချင်းကလေးဘဝအတွေ့အကြုံ (သို့) အပြစ်ပေးခံရခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ကူးယဉ်မှုများကိုတွေ့မြင်ရသည့်အချိန်တွင်သူမြင်တွေ့ခဲ့ရသောပုံရိပ်များကိုသူစိတ်ဝင်စားခဲ့သော်လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ အခြားသူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုများကကျွန်ုပ်တို့ကိုမွေးဖွားစေခဲ့သည်။ သောမတ်စ်၏အတွေ့အကြုံသည်ကျွန်ုပ်၏လူနာများနှင့်ဆင်တူသည်; သူတို့ရှာဖွေနေသည့်အရာကိုအပြည့်အ ၀ သတိမထားမိဘဲ၊ သူတို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအချို့သင်္ဂြိုဟ်ထားသောအကြောင်းအရာကိုထိမိသည့်ရုပ်ပုံသို့မဟုတ်လိင်ဇာတ်ညွှန်းကိုမထိမချင်းရာနှင့်ချီသောရုပ်ပုံများနှင့်အခြေအနေများကိုစကင်ဖတ်ခဲ့ကြသည်။
သောမတ်စ်ကြောင်း image ကိုတွေ့ရှိရသည်နှင့်တပြိုင်နက်သူကပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဒါကရိုက်တာပုံရိပ်ကသူ့ခဲ့ အာရုံစိုက်အာရုံစူးစိုက်မှုပလတ်စတစ်ပြောင်းလဲမှုများအတွက်အခွအေနေ။ ထိုအခါကိုမှန်ကန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်မတူဘဲဤညစ်ညမ်းပုံများ, ကွန်ပျူတာပေါ်မှာနေ့တိုင်းတနေ့လုံးရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။
အခုတော့သောမတ်စ်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သူကသူ့ကိုယ်သူထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်းသူ၏လက်တော့အပေါ်အနည်းဆုံးငါးနာရီတစ်ရက်ဖြုန်းခဲ့သည်။ သူသာသုံးနာရီတညဉ့်အိပ်ပျော်နေသော, လျှို့ဝှက်စွာ surfed ။ သူကအခြားသူတစ်ဦးဦးကိုမြင်လျှင်ခဲ့သည်ဆိုပါကမိမိအပင်ပန်းနွမ်းနယ်သတိထားသူ့ရည်းစား, အံ့ဩကြ၏။ သူကဒါကြောင့်သူ့ကျန်းမာရေးခံစားခဲ့ရကြောင်းဆုံးရှုံးလျှင်, သူတစ်ဦးဆေးရုံအရေးပေါ်ခန်းထဲမှာသူ့ကိုဆိုက်ရောက်ကြောင်းကူးစက်မှု၏စီးရီးလေနောက်ဆုံးတော့သူ့ကိုစတော့ရှယ်ယာယူစေ၏အိပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူကသူ့ယောက်ျားကိုအမိတ်ဆွေများကိုအကြားမေးမြန်းစတင်ခဲ့ပြီးသူတို့ထဲကအတော်များများလည်းစှဲကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
Hardcore porn သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အရေးကြီးသောကာလများ၌ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းနှင့်အစောပိုင်း၊ မေ့လျော့သောသို့မဟုတ်ဖိနှိပ်ထားသောဒြပ်စင်များအားလုံးကိုကွန်ယက်အသစ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်အစောပိုင်းအာရုံကြောကွန်ယက်အချို့ကိုဖော်ထုတ်သည်။ Porn sites များသည် common kinks တွေရဲ့ catalogs တွေကိုထုတ်ပြီးပုံတွေနဲ့အတူတူရောနှောပါ။ အနှေးနှင့်အမြန်ဆိုဖ်သည်သူ၏လိင်ဆိုင်ရာခလုတ်များကိုနှိပ်ပေးသောလူသတ်သမားပေါင်းစပ်မှုကိုတွေ့ရှိသည်။ ထို့နောက်သူသည်ရုပ်ပုံများကိုအကြိမ်ကြိမ်ကြည့်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ သူဟာလိင်တူချင်းချစ်တဲ့လိင်စိတ်နိုးထမှုကိုအမြစ်တွယ်နေတဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားတဲ့ libido လိင်အမျိုးအစားကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ သူသည်မကြာခဏသည်းခံတတ်လာသည်နှင့်အမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွန့်ပစ်ခြင်းမှပျော်ရွှင်မှုကိုရန်လိုသောဖြန့်ချိမှု၏နှစ်သက်မှုဖြင့်ဖြည့်စွက်ရမည်။ လိင်နှင့်ရန်လိုသည့်ပုံရိပ်များမှာပိုမိုများပြားလာသည်။